Gossip News | Cine Khabar
‘साङ्लो’ लुक्स सार्वजनिक, के हो डोटी विवाद ?
on: ६ असार २०७६, शुक्रबार ०८:१४ In: Gossip News, NewsTags:
नायक विराज भट्टको निर्माण तथा निर्देशनमा फिल्म ‘साङ्लो’ निर्माण भइरहेको छ। यतिबेला फिल्मको छायांकन डोटीमा भइरहेको छ। यस्तैमा छायांकन स्थलबाट गीत छायांकनको केही तस्विरहरु सार्वजनिक भएका छन्।...	Read more
‘प्रेम गीत ३’मा काम गर्लान् त राजेश हमालले ?
on: २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार १६:४९ In: Gossip News, NewsTags:
‘प्रेम गीत’ र ‘प्रेम गीत २’को सफलतासँगै निपर्माण युनिट अहिले यसको तेस्रो सिरिज ‘प्रेम गीत ३’को निर्माणमा जुटेको छ । प्रदीप खड्कालाई स्टार बनाउने ‘प्...	Read more
on: १९ भाद्र २०७५, मंगलवार १६:०० In: Gossip News, NewsTags: Aakash Shrestha
‘रुद्रप्रिया’को भरमा अर्यनको करियर …
on: ३ आश्विन २०७४, मंगलवार १६:१० In: Gossip News, NewsTags:
एक समय थियो, आर्यन सिग्देल भनेसी युवतीहरु लठ्ठै हुन्थे। उनको चकलेटी अनुहार र मिठो मुस्कान धेरैलाई आफु प्रति लालाहित गर्ने सुत्र नै बनेको थियो। जब आर्यन सिग्देलले अभिनय गरेको फिल्म प्रदर्शनको...	Read more
‘पर्व’को असफलता पछि खालि हात नम्रता
on: २९ भाद्र २०७४, बिहीबार १३:१८ In: Gossip News, NewsTags:
नेपाली फिल्म जगतकी सुन्दरी नायिका हुन् नम्रता श्रेष्ठ। फिल्म नगरीमा उनको सुन्दरतासँगै अभिनयको पनि खुबै चर्चा पनि हुने गर्छ। लगभग २ दर्जन फिल्ममा काम गरेकी उनले धेरै सफल फिल्म दिसकेकी छिन्। त...	Read more
सुदर्शनको फिल्ममा मात्र पुजा
on: २५ भाद्र २०७४, आईतवार १४:४२ In: Gossip News, NewsTags:
पुजा शर्मा अहिलेको समयको चर्चित नाम हो। ‘३ लभर्स’ बाट फिल्म नगरीमा प्रवेश गरेकी उनि अहिलेकी चर्चित नायिकाको सुचिमा पर्छिन्। ‘३ लभर्स’ पश्चात उनले दोश्रो फिल्मको रुपमा...	Read more
असोज ११ बाट पछि सर्यो ‘मंगलम’, ‘छक्का पन्जा २’ सोलो रिलिज हुने
on: २३ भाद्र २०७४, शुक्रबार २१:३७ In: Gossip News, NewsTags:
असोज ११ गते फिल्म ‘छक्का पन्जा २’ र ‘मंगलम’सँगै आउने प्रदर्शनमा पक्का भएको थियो। छायाँकनको समय देखि नै असोज ११ लाई रिलिज मिति तय गरेको फिल्म ‘छक्का पन्जा २’सँग जुद्न...	Read more
रिटायर राजेश हमाल …
on: २१ भाद्र २०७४, बुधबार १४:३४ In: Gossip News, NewsTags:
महानायक राजेश हमाल अहिले फिल्मको पर्दामा देखिन छोडेका छन्। दुई सय भन्दा बढी फिल्ममा काम गरेका राजेश अहिले भने फिल्म क्षेत्रमा त्यति सक्रिय छैनन्। ५१ वर्षीय उमेरमा मधु भट्टराईसँग बैवाहिक सम्ब...	Read more
अध्ययनको लागि ९ कक्षामा भर्ना भईन् करिश्मा मानन्धर !!!
on: २० भाद्र २०७४, मंगलवार २१:२८ In: Gossip News, NewsTags:
फिल्म नगरिकी एकदमै सुन्दरी नायिका करिश्मा मानन्धरले आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिने भन्दै कक्षा ९ मा भर्ना भएकी छिन्। ८ कक्षा पढ्दै गर्दा फिल्म नगरीमा होमिएकी करिश्माले मैतीदेवीमा रहेको त्रिवेण...	Read more
‘ग्याङ्गस्टर ब्लूज’ पछि आनाको करियर कता ?
on: १३ भाद्र २०७४, मंगलवार १४:२८ In: Gossip News, NewsTags: aana sharma
फिल्म ‘जेरी’बाट नेपाली फिल्म नगरीमा प्रवेश गरेकी नायिका हुन् आना शर्मा। पहिलो फिल्मबाट नै सम्भावना देखाएकी आनाले दर्शक तथा समिक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएकी थिइन्। सम्भावना बोक...	Read more